URamaphosa uxegise imithetho yomvalelo | Scrolla Izindaba
URamaphosa uxegise imithetho yomvalelo
UMengameli uCyril Ramaphosa wehlisele iNingizimu Afrika esigabeni sokuqala somvalelo kulandela ukwehla okuqhubekayo kwesibalo sabahaqwa yi-Covid-19 kanye nabalulumayo kuleli gciwane.
Ekuqaleni kukaNdasa lesi simemezelo sinikeza ithemba ezigidini zamaKristu aphuthelwe yimpelasonto Engcwele yePhasika izolo ebusuku ngenxa yokuqubuka kwegciwane le-coronavirus.
Isimemezelo eMhlanganweni Womndeni wakamuva sisho ukuthi imibuthano yomphakathi, imibuthano yezenhlalo neyezenkolo iyavunyelwa kanye nezindawo zivunyelwe ukufaka abantu abafika kumaphesenti angama-50.
UMengameli uthe, “NgoLwesihlanu oluzayo sizogubha unyaka owodwa selokhu kwabikwa ukuqubuka kokuqala kwe-coronavirus eNingizimu Afrika.
“Kusukela lapho, abantu abangaphezu kwesigidi nohhafu eNingizimu Afrika sebethelelekile kanti cishe abantu abayi-50 000 kubikwe ukuthi babulawe yileli gciwane.”
URamaphosa ubuye wamemezela nezinhlelo zokugoma izigidi zabantu ngaphambi kokuphela kowe-2021, njengoba abahlengikazi abayi-67 000 sebevele begonyiwe.
Kusukela ngesonto elizayo, inani lezindawo ezizosetshenziswa ekugomeni lizokhuphuka lisuke kweziyi-17 liye kuma-49.
“Kulezi zindawo ezingama-49, ezingama-32 zizoba sezibhedlela zikahulumeni bese eziyi-17 zibe ezibhedlela ezizimele.
“Lokhu kufaka nezindawo zasemakhaya ukuze kwenziwe ngcono ukutholakala komgomo kubasebenzi bezempilo basemakhaya.”
Izwe lisayine isivumelwano ne-Johnson & Johnson sokuthola imithamo eyizigidi eziyi-11.
“Kule mjovo ezofika, imijovo eyizigidi ezingu-2.8 izolethwa ngekota yesibili bese kuthi eminye isabalaliswe ekuhambeni kwesikhathi salonyaka.
Sithole nemithamo eyizigidi ezingama-20 kwa-Pfizer, ezokhishwa ngekota yesibili.
Ngaphezu kwalokho, sithole imithamo yokugoma eyizigidi eziyi-12 esikhungweni se-COVAX futhi sisemkhankasweni wokuphothula isabelo sethu semithamo yokugoma ku-African Union.”
Ukwehlela ezingeni loku-1 lomvalelo we-Covid-19 nakho kunemithelela elandelayo:
1. Ukudayiswa kotshwala kuvunyelwe. Abukho utshwala obuzodayiswa ngesikhathi sokubuyela ekhaya.
2. Ukugqokwa kwezifonyo zendwangu noma ukumboza amakhala nomlomo kusadingeka.
3. Isikhathi sokubuya ekhaya sisuka phakathi kwamabili kuya kwihora le-4 ekuseni. Ngaphandle kwabasebenzi abavunyelwe, akekho umuntu okufanele abe ngaphandle komuzi wakhe ngesikhathi sokubuya ekhaya.
4. Ukuhlangana kuvunyelwe. Imibuthano yasendlini ayinakudlula amaphesenti angama-50 eskalo sendawo esize sifike kubantu abayi-100.
5. Imibuthano yangaphandle ayingeqi kumaphesenti angama-50 eskalo sendawo njengoba kuvumeleke abantu abafinyelela kuma-250.